Kolontsaina taona 2016 : hanatevina ny hetsika fanaony ny IKM | NewsMada
Kolontsaina taona 2016 : hanatevina ny hetsika fanaony ny IKM
Nampahafantarina omaly teny amin’ny Tour Sahavola misy ny Ivontoeran’ny kolontsaina malagasy (IKM) ireo taranjan-javakanto hiofanana ao amin’ity foibe kolontsaina ity. Hahatratra 9 izy ireo ka nanatevenana ireo efa nisy teo aloha ny fampianarana teny malagasy (ho an’ny vahiny sy ny tompon-tany), ny taosary hanomezana fiofanana momba ny fanaovan-tsary. Ao koa ny fampianarana tselika kabary amin’ny teny frantsay. Notazonina hatrany ny fiofanana amin’ny lalao « échec », fanorona, piano, valiha, dihy gasy sy ankehitriny.
Raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra, anisan’ny tanjon’ny IKM ny fampiroboroboana ny kolontsaina malagasy. Fikolokoloana ho olom-banona ary fampahafantarana ny kolontsaina sy zavakanto malagasy amin’ny alalan’ny lalao, dihy, zavamaneno, sns.
Nambaran’ny tompon’andraikitry ny hetsika eo anivon’ity foibe ity fa « ezahina ny hanatanteraka fampirantiana indroa sy fampisehoana iray isam-bolana, amin’ity taona 2016 ity ».
Mitodika any amin’ny ankizy sy tanora
Raha ny fanazavana, omaly teny an-toerana, hanome lanja bebe kokoa ny ankizy sy ny tanora ny fiofanana ao amin’ny IKM, manomboka izao. Manamafy izany ireo fandraisana sahady ireo ankizy hanaraka fiofanana raha vao mbola 6 taona monja. « Beazina hahalala ny kolontsaina dieny mbola zaza izy ireny amin’izay ho tsara fototra ny maha izy azy any aoriana », hoy hatrany ny tompon’andraikitry ny fiofanana. Na izany aza, fitaratra ho an’ny zaza sy ny ankizy ary ny tanora ny olon-dehibe. Mila mampitombo ny fahalalany ihany koa izy ireny hahafahany manabe ny taranany. Ny 2 marsa izao no hanombohan’ny fiofanana ao amin’ny IKM Antsahavola.